Teory oroka veloma veloma: ny fahazaran-dratsy mandringa dimy an'ny orinasa | Martech Zone
Alarobia, Aprily 4, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Omaly dia nahavita namaky aho Starfish sy ny Spider: ny herin'ny fikambanana tsy misy mpitondra. Raha ny laharam-pahamehako io dia mety ho 3 na 4 amin'ny 10. Mamaky haingana ary ny hafatra ao aoriany dia ara-potoana sy tena ilaina tokoa. Raha ny marina rehetra anefa dia mety navoaka ho toy ny taratasy fotsy io ary nisy fiatraikany mitovy amin'izany. Tsy manafintohina ny mpanoratra izany… fa ny boky dia hita amin'ny fahitana sy fanamafisana. Tsy boky fihetsika.
Bokin'i Bob Prosen, Teory oroka veloma veloma ny mifanohitra amin'izany no izy. Raha vantany vao noraisiko ity boky ity dia nahatsapa aho fa toy ny niala teo amin'ny escalator ary nankeo amin'ny sambo roketa. Amin'ny alàlan'ny fampidirana fotsiny aho ary efa misy fampahalalana sarobidy. Ity misy teaser - ireo fahazarana mandringa dimy izay mitondra haingana ny orinasa sy ny fikambanana:
Tsy fahatongavana amin'ny lalana mazava
Tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra
Manatsara ny fahombiazan'ny ambany
Drafitra ho solon'ny asa
Fahasosorana amin'ny risika sy ny fiovana
Ummm… ouh! Nofintinin'i Bob fotsiny ny fahasosorako mitombo amin'ny asako. Miasa amin'ny mpampiasa mahafinaritra sy mahomby aho mitombo toy ny adala. Arakaraka ny maha betsaka ny mpiasa sy ny fampiroboroboana no toa mihisatra ihany anefa isika. Tsy mahalala zavatra momba ny orinasanay i Bob fa nofantsihiny tanteraka izany! Ireo dia indrindra ireo zavatra mampiadana antsika fa tsy maintsy ovaintsika eo noho eo.
Nampita kopia roa tamin'ity boky ity tamin'ny olona vitsivitsy tao amin'ny fikambanana aho. Manantena aho fa nahavita izany tamin'ny alàlan'ny fampidirana ihany koa izy ireo! Tsy andriko ny handavaka ny sisa amin'ity boky ity. Tsy mifantoka amin'ireo fahazarana mandringa ireo ny boky, fa mifantoka amin'izay ilaina hanovana ny fandaminana ary hamindra azy amin'ny làlana tsara!
Azoko antoka fa hizara bebe kokoa amin'ity boky ity aminao aho afaka herinandro vitsivitsy. Raiso ny kopian'ny Teory oroka veloma veloma nataon'i Bob Prosen mba hiaraha-midinika azy io.
WordPress: Famerenana ny voina
Apr 4, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Oay, toa ny orinasa iasako amin'izao fotoana izao. Toa nanomboka nitombo ny orinasa iray avy amin'ny orinasa madinika ka hatramin'ny antonony lehibe ho amin'ny tontolon'ny Orinasa, lasa mahazatra ireo fahazarana 5 ireo.
Apr 4, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
dang. tsy manana izany ny tranomboky eo an-toerana.
Izaho dia miaraka aminao 100% ao anatin'io 5 ambony io. Mandalo "aoka tsy hiraharaha ny fitsirihana farany nataonay izahay ary hamerina ny olana mitovy" amin'ny fanombohana ahy amin'izao fotoana izao. oh.
Apr 4, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Mahaliana, engtech. Matahotra ny fahadisoanay farany izahay ka tsy afaka manao drafitra. Herinandro taorian'ny famoahana ary mbola miady hevitra momba ny endri-javatra sy ny fampiasa. Tsy mahasalama mihitsy. Ao amin'ny orinasa iray, iray amin'ireo lehibe indrindra nantsoiko hatrizay hoe "Analysis Paralysis".
Tsy maintsy mandroso fotsiny ianao indraindray. Raha ny hevitrao anefa dia tsy afaka mihetsika fotsiny ianao raha tsy manitsy!
Apr 5, 2007 amin'ny 12: 04 AM
Maniry aho fa tia namaky (ankoatra ny lahatsoratra bilaogy) tsy afaka maka sy mamarana boky hamonjena ny aiko.
Apr 5, 2007 amin'ny 7: 52 AM
Books dia ny famoronako ary tena miditra amin'ny eritreritro izy ireo. Mazoto mamaky teny foana aho – indrindra satria afaka nampihatra izay nianarako tamin’ny zavatra nataoko foana aho.
Mazava ho azy fa ny fahaiza-mamorona dia mety tsy fepetra voalohany amin'ny asa ataoko (na dia ifotony aza izany). Ianao, mazava ho azy, dia sady nahita fianarana no nampiofana ny tenanao amin'ny famoronana – ka heveriko fa ny fanokafana boky dia mety tsy ho loharano tsara indrindra ho anao. Tena fomba fijery mahaliana izany ry Bitt! Manana toerana famoronana hafa ve ianao?
Miezaka manao boky 1 amin'ny 5 ho foronina aho mba tsy hilevina amin'ny fitaovan'ny fitarihana, ara-teknika ary ara-barotra. Efa tara amin'izany aho izao!
Apr 5, 2007 amin'ny 4: 38 AM
Sao dia mila tapahana ny lohany sao maty?? Sangisangy izany.
Apr 5, 2007 amin'ny 7: 45 AM
Tsara! Kely Starfish hatsikana! Matahotra aho sao mety hahafaty antsika tokoa ny fanapahana ny loha. Mampihomehy, na dia manana ireo olana 5 ireo hokarakaraina aza isika, ny lohany no olona inoako indrindra hanao ireo fanovana ilaina.
Indrisy anefa fa tsy eo amin'ny toeran'ny fahefana hanao ny fanovana aho ka sarotra amiko ny manao izany. Miezaka mampiova anefa aho!